I-Top 50 Abafazi beGoli be-All-Time
Ngubani owona owona mgca wegalufa wesifazana? Ngaphantsi kwesi simo sethu se-Top 50, ngokuqala ngo-Nombolo 50 nokubala ukuya kwiNombolo 1.
Izikhundla zethu zibandakanya abadlali begalufu abahlala besebenza kwiLPGA Tour, kubandakanywa nabambalwa abasese-20s. Sizame ukulumkela malunga nendlela ephakamileyo esibala ngayo abancinci, kodwa, hey, ukuba iinombolo zivuma ...
Enye into enokubangela abafundi abathile malunga ne-Top 50 rankings kukuba iinkwenkwezi zokuqala zegalufa lobufazi besifazane zibonakala zingaphantsi kwezona zikhundla kunezinye, ezinye iindawo ezifana neentlobo ze-golf greats. Kutheni kunjalo? ULouise Suggs, enye yeenkwenkwezi zokuqala, wachaza kakuhle kakuhle: "Amasimi ethu azaliswe ngabantu abahlala kuyo, kuba leyo yindlela kuphela yokwakha umdlalo.
I-LPGA ibone ubunzulu obukhulu kunye nokukhuphisana kunye nesizukulwana ngasinye esilandelayo segalufa. Yingakho umva ngokuya kwigalufa yabasetyhini (kunye namadoda, kungakhathaliseki ukuba ulinganayo), kufuneka ufake isicelo sokunciphisa amanani. Sekunjalo, siye safaka ezininzi zeenkwenkwezi zokuqala (kubandakanywa nabambalwa ongenakukuva) kwi-Top 50 yethu.
Qhubeka nge rankings ...
Bettmann / Getty Izithombe
UCampbell wayeyinkwenkwezi yokuqala yokuqala yegalufa yabasetyhini. Ukudlala kumaxesha eminyaka ngaphambi kokuba igolfu yolwazi lwabafazi libekho, iCampbell yanqoba amanqweno amancinci amane aseBrithani nase-United States ukusuka ngo-1909 ukuya ku-1911, emva koko yashiya igalofu kangangokuba iphantse iminyaka elishumi ukugxila ebomini obatshatileyo. Ekubuyeni kwakhe, wathola umdlalo udlulile ngokuhamba kwakhe. ICampbell, malunga no-40, wabuya wabuya wabuya wabuya wakhupha ngaphezu kweenyanga ezili-10, wabuya waphumelela omnye u -Amateur wase-US ngo-1924. I-Campbell isabonwa ngabadlali-mlando begalufu njengenye yeemidlalo ezifutshane.
Ngaphambi kokuba u-Annika Sorenstam abe ngumdlali we-LPGA omkhulu kunazo zonke waseSweden, uLiselotte Neumann wabamba ukuba ulwahlulo. Ukunqoba kwe-LPGA yokuqala ye-Neumann kwaba yi-1988 US Women's Open . Uphumelele amaxesha angaphezulu kwama-12 kwi-LPGA, kwaye wathumela ukunqoba okuninzi eYurophu, eJapan, e-Australia nakwezinye iindawo.
Ukulandela i-stellar ijunior golf career, i-Creamer yaqhuma kwi-LPGA njengomdlalo wayo oneminyaka engama-18 ubudala ngonyaka ka-2005. Wawunqoba amaxesha angama-8 phakathi ko-2008, kuquka nezine ze-LPGA kwi-2008. uloyiso. Ukulimala kwamnciphisa emva koko, kodwa uCreamer wongezelela umsebenzi we-LPGA ukunqoba uNombolo-10 ngowama-2014. Ubuye wanqoba amaxesha ambalwa kwiJapan Tour.
U-Hanson wanqoba i-Amateur yama-US yase-US yama-1950, ngoko waba ngumqhubi oqhubekayo kwiminyaka elishumi yokuqala yomlando weLPGA Tour. Wayegqiba ngempumelelo ye-career ye-17, ezintathu zazo zazingundoqo. Ngama-1958, uHanon wahokela ukutyelela ngemali kunye nokulinganisa amanqaku.
UJones wayeyinqaku elimangalisayo lokunyanelana kunye nokukhuphisana kulo lonke umsebenzi wakhe, kwaye wayephucule xa ekhula. Amaxesha akhe asemgangathweni aphuma ngo-1999 ukuya ku-2003, kwiminyaka engama-40. UJonas wagqiba ngokuphumelela kwe-13 kunye nedumela njengenye yezona zifundo eziphambili kwi-course.
Sam Greenwood / Getty Izithombe
Wazalelwa ngo-1997, uKo ilula i-golfer encinci kuloluhlu. Omnye unokuthi uphumelele kwi-Top 50 ngaphambi kokuba uguqule iminyaka engama-20 ubudala. U-Ko ugcina iirekhodi ze- LPGA kumncinci omncinci wokutyelela (uneminyaka eyi-15, xa wayesengumtsalane) kunye nomncinci omncinci kunobuncinci (uneminyaka eyi-18). Ekupheleni konyaka we-2017, uKo sele sele enama-14 e-LPGA, i-Award of the Year award, kukhokelela ukutyelela ngemali kwaye iphumelele kwi- CME Race ukuya kwi-Globe .
I-Pettersen ibonakala ihlala ixutywe, kwaye iququzelele ezininzi zokugqibela. Ezo zibini zincinci, kubandakanywa enye kwi- LPGA Championship kwaye ngo-2013 kwi- Evian Championship ngonyaka walo wokuqala emva kokuphakama kwimoya enkulu. Ngokubanzi, ngonyaka we-2017, iPettersen yaba ne-15 kwimpumelelo ye-LPGA kunye neyeshumi elinesibini kwiYurophu.
U-Tseng akaphumelelanga kwi-LPGA Tour ukususela ngo-2012, kwaye akaphumelelanga nakweyiphi indawo ukususela ngo-2014. Ukuba akayi kuphinda aphinde aphumelele, unokuthi ahlawule i-Top 50 yethu ngexesha elithile. Kodwa ngaphambi kokuba umdlalo wakhe ungene kwi-tailpin, u-Tseng wayeyi-golfer ephezulu. Uphumelele umqhubi we-LPGA we-2011 kwi-career yakhe yesine kwi-tender age 22. U-win win No. 5 weza kwi- Women's British Open ngaloo nyaka. U-Tseng unomsebenzi we-LPGA we-15 wemisebenzi, kunye nezinye iindwendwe kwezinye iindwendwe zehlabathi.
U-Stacy Lewis uphumelela ngokukhawuleza kwi-Top 50 yamaGolisa aKhe aMaGolisa aMaxesha onke. URobert Laberge / Getty Images
ULee wayeyimodeli yokuzibandakanya kwiminyaka yokuqala ye-2010: Ukuphumelela kwakhe ngowokuqala ngo-2011, ezine ngo-2012, ezintathu ngo-2013 nangama-2014. Ngesihloko sokubonga kunye neMigangatho yoMdlali weMinyaka, uL Lewis wanyanzelela indlela yakhe kwii-rankings zethu. UL Lewis unemisebenzi eyi-12 ye-LPGA iphumelela ngoku. Kaninzi "
I-Shin inomnye wemisebenzi engavamile kwii-rankings zethu. Ngaphambi kokuba aneminyaka engama-25 ubudala, iShin yahlanganisa i-LPGA ye-10 ye-Tour win, kubandakanywa izikhundla ezimbini (i-2008 ne-2012 yabaseBrithani yabaseBrithani). Emva koko washiya iLPGA Tour ukuba adlale eJapan, kufuphi nekhaya laseKorea. Akaludlala kakhulu iimbali zamanzi. Ngaphambi kokujoyina i-LPGA wawuthatha amaxesha angaphezu kwama-20 kwi-KLPGA. Emva kokushiya i-LPGA, waqhubeka ephumelela eJapan kwaye ngoku unako ukuphumelela kwamadidi kabini kwi-JLPGA.
Amandla emva kokudala i-LPGA yaseJapan kwaye amandla akhe eneenkwenkwezi asinceda ukuba uhambo luphile kwaye luphumelele kwiminyaka yakhe yokuqala, uHoluchi wayengumdlali wokuqala waseJapan ukuze anqobe iqela lobungcali. Wayelawula eJapan kodwa wadlala ngokukhawuleza eUnited States, kodwa wagqiba ukuphakama ngaphezu kwe-10 kwiluhlu lwemali lwe-LPGA. Uphumelele kwii-tournaments ezimbini zeLPGA, kuquka i-1977 yeLPGA Championship. I-Higuchi izuzwa ngamagosa angu-69 kwi-JLPGA.
UJameson wayenamandla kwixesha eliphambi kweLPGA yegalufa yabasetyhini, ephumelela ama-Amateurs amabini e-US, ii-Women's Western Open (enkulu ngexesha lawo), kunye ne-US Women's Open Open ngaphambi ko-1948. 300 kwintambo ye-72-hole, ukwenza njalo ngo-1947 I-US Women's Open Open. Kamva wongezelela isihloko se-Western Open Women's 1954.
USmith, owaziwa ngokuba ngu "Miss Personality," wasebenza ngokungakhathali ukukhuthaza igorfu yabafazi ngexesha lakhe elide. Kumele ukuba wasebenza nzima kumdlalo wakhe, naye. Ukuphumelela kwakhe kokuqala kweLPGA Tour ngowe-1954, kwaye ekugqibeleni kwakhe kwaba ngowama-1972. Phakathi kwalawo amanye ama-19 anokunqoba kunye neebini eziziintloko. U-Smith naye unomlinganiselo wokubeka uphawu lwenkqantosi yokuqala yokuqala kwimbali yeLPGA.
Ifana kakhulu noMarilynn Smith ngokubanzi kobugcisa bakhe. NjengoMarllene Bauer oneminyaka engama-16 ngo-1950, wayengomnye wabasunguli beLPGA Tour. Wadlala ngokukhuphisana kwimizuzu emithathu yokuqala yeTyelelo. Kwaye uHagge uthumele ukuphumelela kwama-26 okubandakanya enye iqela elikhulu.
I-Kirby / I-Topical Press Agency / i-Getty Izithombe
Owona mkhulu kunenekazi waseMelika wase-Amateur, uVare wayevame ukubizwa ngokuthi " uBobby Jones " ngosuku lwakhe. Umqhubi omkhulu kunye nomdlali omkhulu wezemidlalo, ngo-1924 wawuthatha umdlalo wama-59 wama-60. Nguyena kuphela umzuzwana wexesha eli-6 le-US Women's Amateur. I-LPGA Tour's Vare Trophy kwisilinganiso esiphantsi se-score score is named in his honor.
USusie Maxwell Berning, ngaphezu kwanoma yimuphi umdlali omdala wesifazana, ulungelelanise ishedyuli yakhe yokutyelela ukugxila ngakumbi kwintsapho. Ngamahlandlo amane kuphela ekusebenzeni kwakhe ekusebenzeni kwimizuzu engama-20 okanye ngaphezulu kwexesha. Ngoko ukuphumelela kwakhe kwinqanaba eli-11 - libonakala liphantsi. Kodwa ezine zalaba-11 zaziyi-majors, kubandakanywa abathathu be-Women's US (1968, 1972, 1973).
U-Okamoto walandela iminyaka embalwa emva kweChako Higuchi kwi-LPGA yaseJapan. Ngoxa i-Higuchi yenza okuthile u-Okamoto akazange aphumelele - u-Okamoto wenza into ethi iHoluchi ayizange idlale ixesha elipheleleyo kwi-American LPGA. Iminyaka ka-Okamoto eMelika yayinemveliso, ngokunjalo, njengoko yayibandakanya ukunqoba kwe-17, kunye kunye, ngo-1987, isihloko somnxeba kunye nomvuzo weMdlali wonyaka. KwiJLPGA, Okamoto yawina amaxesha angama-44.
Omncinci omnye wegalufa eziliqela kwi-Top 50 ababenokuthi babenokubakho ukulimala okungabonakaliyo. Kwimeko encinane, wawubamba amaxesha angama-12 kwiminyaka emine ukususela ngo-1979 ukuya ku-1982, waza wabuya utyando olunzulu kwaye waphumelela kuphela. Noko ke, ukunqoba okongezelelweyo kwakungowomnyaka we-1988 du Maurier Classic, enye yeyona ntshatsheli enkulu.
I-US Women's Open Open yaqala ukuphumelela kweKerr enkulu, kwaye yamenza ibe ngamadijithi aphindwe kabini kwiimpumelelo zeLPGA Tour. Umqhubi oqhubekileyo kwixesha elikhuphisanayo, ngo-2010, wongezelela wakhe wesibini omkhulu kwi-LPGA Championship. Ekupheleni kwexesha le-2017, i-Kerr ye-LPGA yokubamba iqela imile kuma-20.
Gxila kwiMidlalo / Getty Izithombe
Udumo lwakhe njengentombazana yeTour's sexy gouror yayivame ukugubungela indlela igolfu enhle ngayo uStesonson. Wayengumngcipheko oqhubekayo phezulu kwikhobhobhodi ngokubanzi kwekhondo lakhe, ephumelela ngamaxesha angama-16. Ukubandakanywa kulezo zintlawulo ze-LPGA zazizihloko ezi-3 ezinkulu zezobuqhankqalazo, enye yazo yayingu-1983 US Women's Open.
I-Palmer yayingcono kakhulu ekuqaleni kwayo ukuya kuma-1970, ukufumana isihloko semali kunye nomvuzo weMdlali weNyaka ngo-1975. U-Palmer waya iminyaka eyisixhenxe engakhange aphumelele emva kokujoyina iNtyelelo, kwaye wancinci ubuncinane kwixesha elilandelayo kwezixhenxe ezilandelayo. . WayekuMgangatho ophezulu kwi-10 uluhlu lwemali ukususela ngo-1968 ukuya ku-1977 kwaye wagqitywa ngama-19 kwi-Tour, ezimbini zazo zaziyi-majors (kuquka ne-1975 US Women's Open). Ukuba uyazibuza, hayi, akahambelani noArnold Palmer .
Waphumelela kusasa waza wancinwa rhoqo. Uphumelele ngo-1970 waza wawina ngo-1985. Wawuthatha amaxesha amane kwiminyaka emine eyahlukileyo. Wagqiba kwi-Top 10 kwisohlwini lwemali 10 iminyaka echanekileyo kunye ne-11 epheleleyo. Yiyiphi iBlalock engazange iyenze yayikuphumelele inkokheli enkulu, okanye ibhaso elikhulu (uMdlali weNyaka, isihloko somnxeba, ukubhala isihloko). Amagosa akhe angama-27 awona maninzi yilo nawuphi na umdlali weLPGA Tour ngaphandle kweyona nto.
Ipaki, ekupheleni kwishedyuli ka-2017, sele sele ine-18 ye-LPGA inqobayo. Lelo nani alimbekeli yonke into ephakamileyo eluhlu lwabagadi begalufu kunye neeninzi zeLPGA . Kodwa ezisixhenxe zezo zine-18 zineengqungquthela, kwaye zibophe iPaki kwindawo yesikhombisa kwiluhlu lwabagadi begalufu kunye nezona zininzi eziphumeleleyo kwi-LPGA . Ngo-2013, iPaki yawina ama-matatu aqalayo omnyaka, i-LPGA yokuqala yegolfer kwixesha langoku ukwenza njalo. Ipaki yayiyi-golfer yokuqala yaseKorea yokuphumelela umvuzo weMdlali weNyaka weLPGA. Ipaki ikhulume ngokuthatha umhlalaphantsi ngokukhawuleza ukuqala intsapho, ngoko ke ingaba iqhubeka ishukunyiswa kule ndawo incike kwiminyaka emininzi eyaqhubeka ukuyidlala nayo. Siyibeka ngokufanelekileyo ngoku, ngoku.
U-Stacy wayengakaze abe ngumdlali obalaseleyo - wagqiba kwi-Top 10 kwisohlwini lwemali kuphela ezintlanu ngezihlandlo ezatolula ukususela ngo-1976 ukuya ku-2000-kodwa wayehlala eyingozi. Ngokukodwa xa iintsika ziphezulu. U-Stacy uzuze i-US Women's Open Uvini kathathu, kwaye wongeza enye yesine phakathi kwee-18 zeentlawulo. Kaninzi "
Umsebenzi kaCaponi wawunomdla ongathandekiyo. Kodwa umphumo wokugqibela waba yimpumelelo engama-24 kunye neentloko ezine. Wawina ama-majors ngowe-1969 no-1970, wabuya ucolile, emva koko emva kweminyaka eyi-10 waba nempumelelo. UCaponi uzuze amaxesha angama-10 ngonyaka we-1980-81, kwaye akazange aphinde aphumelele.
NjengoHollis Stacy, iMeg Mallon inama-18 kunye neentloko ezine. Kodwa i-Mallon yathumela ezo zihloko kwi-career eyenza ixesha elide emva kweLPGA Tour (kwaye kamva kamva lithetha ubunzulu ngakumbi kwiTyelelo), yayilinde ixesha elide, kwaye yayilungele kangcono xa kuthelekiswa no-Stacy. Ukuphumelela kwe-LPGA yokuqala ye-Mallon ngo-1991, ngowokugqibela ngo-2004.
Uphumelele amaqhosha amabini, kodwa u-Pepper u-victory victory of 17 ungowona mncinane kunoma yiyiphi i-golfer kwi-Top yethu 25. Ngoko ixabiso lakhe lomsebenzi lingaphantsi kwelo nawuphi na umntu obekwe phambi kwakhe, kwaye uninzi lwazo lubekwe emva kwakhe. Kodwa ixabiso layo eliphakamileyo laliphezulu kakhulu. Ukususela ngo-1991-96, uPepper wagqiba akukho ngaphantsi kwe-5 kwirejista yemali kwaye wawina amaxesha angama-12. Ngomnyaka we-1992, wayekhokelela ngemali kunye nokufaka amanqaku kwaye waba ngumdlali wonyaka. I-Pepper enye umdlali oye waba nompembelelo wokuqala kumsebenzi wakhe, wafa ngokukhawuleza, ngokulimala. Kaninzi "
Iimpumelelo ezingamashumi amabini ezomsebenzi kwi-LPGA Tour, iindwendwe ezine, malunga nama-30 aphumelele kwezinye iindwendwe, isihloko sezimali seLPGA, ibhaso lomdlali we-LPGA wonyaka, kunye neenombolo ezininzi zeemali ze- Ladies European Tour . Lo msebenzi mhle. Ukuphumelela kwe-LPGA yokuqala ye-Davies kwaba yi-1987 US Women's Open, uloyiso obangela ukuba i-LPGA iguqule imithetho yezohambo ukuze inike ubulungu ku-Davies. Kaninzi "
I-win-time win-27, i-Ochoa yayinonyaka ophumayo ngo-2006 owalandelwa kwizithende eziliqela zexesha lokudlala oluphezulu lwe-Top 10. Umshini we-birdie, u-Ochoa wabeka irekhodi ye-LPGA yamaninzi amaninzi ngonyaka ngonyaka ka-2004. Ngo-2006, wanqoba amaxesha amathandathu, wagqiba u-Annika Sorenstam iminyaka emi-5 egijimayo uluhlu lwemali, kwaye wawunqoba i-Vare Trophy ngesine- kwimbali yoTyelelo. Kwaye uMdali woMnyaka uzukisa. Uphumelele ngowona wokuqala wokuqala kwi-2007 ye-British Open Women. Xa wazisa umhlala-phantsi wakhe ngo-2010, i-Ochoa inqobile izihloko zemali emithathu, izihloko ezine zokubeka amanqaku kunye neMigangatho emine yoMdlali weMinyaka. Umsebenzi wakhe wawufutshane, kodwa wawunobungcali. Kaninzi "
U-Wethered wayengumnqweno omkhulu wesifazana wexesha eliphambili leMfazwe Yehlabathi II. Uninzi lweGlenna Collett Vare phambi kwakhe, kodwa uWethered wayengumdlali ongcono ngokusekelwe kwiziphumo kunye nabahlala naye bathi ngaye. Iziphumo: Vare kunye noWethered badibana nokhuphiswano kathathu, kwaye uWethered waphumelela kathathu. Ubungqina: Phakathi kwabanye, uBobby Jones uthe wayeziva "ekhulile" ngo-Wethered's ballstriking. Umsebenzi wakhe wawufutshane, kodwa ulawulo. Ukwahlula njengenye yexesha elihle kunye nomqhubi.
I-Rankin ngumdlali obalaseleyo kwimbali yegalufa - indoda okanye ibhinqa-ngaphandle kokunqoba kwebhola. Wawunqoba amaxesha ambalwa kunokuba uJane Blalock, naye engenazo ezinkulu, kodwa wafezekisa ngokubanzi kwaye waba nexabiso eliphakamileyo eliphezulu kuneBlalock. U-Blalock akazange alondoloze isihloko sesixa; I-Rankin inqobile amabini. U-Blalock akazange alondoloze isihloko sesigxina; I-Rankin iphumelele kathathu. UBlalock akazange abe ngumdlali wonyaka; I Rankin, kabini. I-Rankin, eyona ntshaba eyenzekayo ukususela ngo-1968 ukuya ku-1979, xa sele iphelile kwii-Top 10 25 ngexesha elilodwa. Yaye wenza konke xa elwa neentlungu ezibuhlungu ezingapheliyo kwiminyaka yakhe engcono, ekugqibeleni wamnyanzela igulane. Ngembuyiselo engcono kunye nexesha elingakumbi, i-Rankin inokuthi ikhuphe kwi-Top 10 kuleluhlu. Kodwa yintoni akwenzayo - kungekhona into ayenokwenza - eyimhlaba kwiNombolo 20. Okunye »
UMann wathola amaxesha angama-38 emsebenzini wakhe we-LPGA, kubandakanywa amaxesha angama-10 ngonyaka owodwa (1968). Ungomnye wabagolisa abaliqela kule nhlu (ekhokelela yonke indlela eya kuNancy Lopez) ophumelele emancinci angaphantsi kunokuba umntu alindele - ezimbini nje. Kodwa i-LPGA Tour yayineeminyaka emininzi kwimisebenzi kaMann xa kwakukho amabini aphakamileyo, okanye amathathu, ngexesha ngalinye, kunamhlanje amahlanu. U Mann watyhola isihloko sokuvakasha kwi-1968 kunye nesihloko semali ngo-1969.
Wavula umnyango weKorea umqhubi ukuya kwiLPGA Tour, kwaye yiyiphi iphayona elifanelekileyo likaPha. Phantse zonke ezo zenzeke zenzeke kwiinyanga zithandathu nje emva kwe-2-win-win-win's season of 1998. I-Pak yahlulwa emva kokulimala, yaphumelela kuphela emva kwe-2007 kwaye yahlala umhlala-phantsi ngo-2016 .
Unokwenza ityala eliphuma kuzo zonke izinto ezihlala kuyo - uBradley, uShehan, uKumkani, iNkster, uAlkott - uDaniel wayenetalente ekhethekileyo. Unqobile izihloko zemali, ubeka izihloko, izibhengezo zonyaka weMdlali, kunye nee-tournaments, ezingama-33 zazo kwiLPGA Tour. Into awazange ayinqobe yayiyizikhundla ezininzi. Abanye abadlali esibachazelayo ngamnye bawine ubuncinane ubuncinane abahlanu.
Omnye weBig Four (kunye noBerg, Suggs kunye neBabbie) kwiintsuku zokuqala zeLPGA Tour, amaRawls ayekhuphisana ixesha elide kunanoma yiphi na enye, angayinqobi yokugqibela yakhe kude kube ngo-1969. Wagqiba nge-55 LPGA Tour, kuquka ii-boss ezisibhozo (ezine zazo ze-US Women's Opening titles).
Ukuqala phakathi kwee-1970 ukuya ngasekupheleni kwee-1970, i-LPGA Tour yathatha ukugqithisa okukhulu ekuqhubeni nasekukhuphiseni jikelele. Kwaye u-Alcott wayengomnye wabadlali ababethe ngolo hlobo. Waqala ukuphumelela ngo-1975 waza waqhubeka ephumelela ngo-1991 uNabisco Dinah Shore, owokugqibela wee-29 zeLPGA kunye neenqununu ezinhlanu ezinkulu. Phakathi kwamanye amaninzi awona maqhinga kwaba yi-1980 US Women's Open. Kwaye u-Alcott unomkhethe wokuba yi-golfer eyaqala iqela le-Champion ukuya echibini kwindawo ebizwa ngokuba yi- ANA Inspiration . Kaninzi "
Iimpumelelo ezingamashumi amane namabini, ezinezikhundla ezine kwi-career eyadlula ukususela ngo-1961 ukuya ngo-1990. Kunzima ukuphikisana noko. U-Haynie wayeya kukukhumbula kangcono namhlanje njengenye ye-greats yonke yexesha ayengenayo insalela yokuba neyona mininzi yeminyaka yakhe egqithiseleyo yi-juggernaut eyaziwa ngokuba nguKathy Whitworth. Kaninzi "
Inkster ngumdlali onzima ukubeka ngokucacileyo olu luhlu. Phakathi kwabahlali bakhe abaphezulu (Sheehan, Bradley, Alcott, uDaniel, Lopez, uKumkani), iNkster yayingelula kakhulu. Izindleko zakhe ezingama-31 zihambelane neentlawulo zomnye zabanye (ngaphandle kwe-Lopez yama-48), kodwa akazange alwe neveki-nge-veki-ngaphandle, kwaye i-Top 10 encinci iphelile. I-Inkster ayizange izuze isihloko somnxeba, ibhala isihloko, okanye ibhaso lomdlali wonyaka. Kodwa unayo izihlwele ezisixhenxe - ngaphezu kwazo zonke ezinye iigolfu. I-Inkster inomnye umboleko owongeziweyo: ezintathu zokulandelelana ze-Amateur zase-US zamakhosikazi. Kaninzi "
I-big-hit "I-Miss Sluggs" ithumele iinqununu ezingama-58 kunye nobuncoma obukhulu be-11, kunye nempumelelo e-US naseBrithani. Uninzi lwaloo maqoqo lwafika kwiminyaka elishumi yokuqala yokuhlala kweLPGA, kwaye ezinye ze-LPGA zangaphambi. I-Suggs yayivame ukufihla ngexesha lakhe ngeBabes Zaharias, ukudala uxhaso olungazange luhlale lunobungane. Namhlanje, ibhaso le-LPGA ye-rookie eliphezulu libizwa ngokusemthethweni ngokuthi uLouise Suggs Rolex Rookie we-Award's Year. Kaninzi "
Njengo-Inkster, uShehan akazange alondoloze isihloko semali. Ngokungafani ne-Inkster, uShehan wazuza isihloko sokubonga. Waphinde waba nempumelelo ye-tournaments ezingama-35 kunye neengqungquthela ezithandathu, kwaye wanyula amaninzi aphezulu kwi-10 kwi-career yakhe ekumanyaniseni kwakhe phambi kweNkster kuleluhlu. Ininzi ye-LPGA ye-LPGA iphumelele kwiminyaka yee-1980, kodwa yaphuma no-bang ngo-1996 ngokwenza uNobisco Dinah Shore ukuphumelela kwakhe kokugqibela. Kaninzi "
Ngomnyaka we-1935, wabhekana neGlenna Collett Vare kwii-final of the US Women's Amateur. Ngo-1980, xa uBeth Daniel ebesesibini ngomnyaka, uBerg waglala ixesha lokugqibela kwiLPGA Tour. Uzuzwa ngamanqanaba angama-60 yi-LPGA. Ezilishumi elinesihlanu zazo (irekhodi labasetyhini) zaziyi-majors - nangona ezi-14 zazo zahlula phakathi kwababambe iqumrhu kunye ne-Western Open, ityelelo leethenketenti ixesha elide ukususela kwiminyaka engafanelekanga.
Wathumela abafana abathandathu abafana noSheehan, kodwa "kuphela" ama-30 amaqhinga emisebenzi ngokuthelekiswa no-35 kaSheehan. UBradley naye wavala iitoni ze-Top 10s (kunye ne-Top 3s). Ukuphakama kwakhe kwakuncinane nje kunokuba uShehan - uBradley wazuza izibini zemali ezimbini, iiTrophies ezimbini zeVare kunye nezibini ezimbini zoMdlali wonyaka. Kwaye ngo-1986, uBradley wayinqoba ezintathu zezine ze-LPGA. Kaninzi "
Kwiminyaka eyisixhenxe yokuqala kwiNdwendwe, uKumkani akazange aphumelele kanye. Emva koko wawunqoba ubuncinane kanye nganye kwiminyaka eyi-10 ezayo, eninzi imizuzwana, ezithathu, ii-Top 10s, ukubeka amanqaku, izihloko zemali kunye nomvuzo weMdlali woNyaka. WayeMdlali weMnyaka kathathu (ngo-1984, 1989, 1993), kwaye wagqitywa ngempumelelo ye-LPGA engama-34, ezithandathu zazo zaziyi-majors (kuquka ne-US Women's Open Open kabini). Kaninzi "
I-Webb yi-golfer ephezulu kakhulu ephezulu kwi-Top 50 esasidlala kwiLPGA Tour. Unemisebenzi engama-41 ye-LPGA yokuphumelela ukuya kumhla, kunye nempumelelo kwi-ALPG, i-Ladies European Tour kunye ne-Japan LPGA. Ezi sixhenxe zala ma nqanaba ziyi-majors, kuquka nee-US Women's Opening titles. I-Webb ibakhokelela ekutyekeni ngemali kathathu (1996, 1999, 2000), ngokulinganisa amaxesha amathathu (1997, 1999, 2000), kwaye yayinguMdlali wonyaka ngo-1999 no-2000.
I-Zaharias inengxabano nje ngokuba ngumdlali obalaseleyo kumfazi wexesha lonke (wadlala, kwaye uyaphuma, phantse yonke imidlalo, kuquka ukuphumelela kweemidlalo zeOlimpiki kwindlela kunye nensimu). Njenge-golfer, abanye bacinga ukuba nguye ongcono, naye. Uthiwa yi-41 ye-LPGA, kwaye uthumele amaninzi amaninzi njenge-amateur. Kwimigangatho engama-41, i-10 yayingama-majors, kwaye ezintathu zazo zaziyizihloko ezivulekileyo ze-US Women (1948, 1950, 1954). Wawina wonke amaqhosha amathathu i-LPGA yadlala ngowe-1950, kwaye wawaphumelela ngo-1954 US Women's Open Open by 12 strokes. Ngo-1945, i-Zaharias yadlala kwii-tournaments ezintathu ze-PGA Tour kwaye zancinciwa kuzo zonke ezintathu. Kaninzi "
UKarrie Webb wadlala ngendlela yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama yeFame ngenkqubela e-20s. Kwiminyaka engama-20, iCarner yawina amahlanu ama-Amateurs ase-US ama-Women's Amateurs-akazange aguqule ukufikelela kwimizuzu engama-30. Nangona kunjalo wayeneemidlalo ezingama-43 ze-LPGA Tour, kunye ne-slaughter of awards, izihloko zemali kunye nezihloko. Kaninzi "
I-Lopez yafumana amaxesha angama-48, ininzi yexesha lakhe (ukuphumelela kwakhe kwaba ngowama-1978 kwaye iphela ngo-1997). Kwakhona waba nezona zihlandlo ezinkulu zexesha lakhe, kubandakanywa nonyaka omkhulu kwi-LPGA . Kwaye ixesha lakhe laliyinto emangalisayo. Le mibandela imbeka ekusebenzeni kweNombolo 1. Kodwa iLopez yaphumelela "kuphela" iimbumba ezintathu, kwaye ayikaze ivule i-US Women's Open. Wayecacile uNombolo 1 phakathi kwabo bonke abantu abaphila ngexesha elide, nangona kunjalo. Wayengumkhokeli wemali kathathu, ubeka umkhokeli kathathu, kunye nomdlali weLPGA weNyaka ngezihlandlo ezine (1978, 1979, 1985, 1988). Kaninzi "
I-Whitworth iphumelele imicimbi ye-88 ye-LPGA Tour, ngaphezu kwanoma yimuphi umfazi, kwaye ngaphezu kwanoma yimuphi na umntu ophumelele kwi-PGA Tour. Eyokuqala kwale ngxowankulu yayingu-1962, ngowokugqibela ngo-1985. Amathandathu abo ayingqobhoko enkulu. Izihlandlo ezisibhozo wahokela uhambo ngemali. Amaxesha asixhenxe ama-Whitworth atyhola i-Vare Trophy, kwaye amaxesha asixhenxe wayenguMdlali wonyaka.
UWright uzuze amaxesha angama-82, kunye namajelo angama-13, kwaye ngokukhawuleza wafaka amanqaku aphindwe kabini kwiminyaka emine elandelelanayo. Kwaye wenza oko naphezu kokuyeka ixesha lokubhenketha ixesha elizeleyo ngama-34 ubudala. Wawunqoba i-LPGA Championship izikhathi ezine kunye ne-US Women's Open Open. Ukuguqa kwakhe kuye kwanconywa ngabaninzi (kubandakanye noBen Hogan ) njengelinye lezona zinto zilungileyo - mhlawumbi iindaba eziphambili zegalufa. UWright wayesoloko ecingelwa ukuba yinto ehle kakhulu (nanko kunjalo ngabanye) ude uyazi-ngubani oza kunye ... Okunye »
Abaninzi bayakuthandana noMikkey Wright, abanye bakaKathy Whitworth; kodwa u-Annika Sorenstam nguye okhethiweyo njengeNombolo 1 yexesha lonke. S. Levin / Getty Izithombe
Amanani akhe ankulu njengalewo aBerg kunye noSugs, uWright noWhiteworth, kodwa uSorenstam uthumele loo manani ngokubhekiselele, ekude, amanqanaba aphezulu kakhulu, kukhuphiswano lwegalufa lwabasetyhini ukuya kulelo nqanaba. Yaye ke yindoda enkulu yeyona ntokazi yexesha lonke. Ukunqoba kwe-LPGA yokuqala ye-Annika yi-US US Women's Open; Ukuphumelela kwakhe kokugqibela kweLPGA kwaba ngowama-2008. (NjengoWright, uSorenstam wayethatha umhlalaphantsi ngaphambi kweminyaka engama-40.) I-Sorenstam yayiyinkokeli yokubheka ityelelo ezintandathu, isihlandlo semali eyisihlandlo ezisibhozo, kwaye iphumelele uMdlali wonyaka we-Award. Kaninzi "
I-Bio yeGolfer uDavid Duval
UJulius Boros: Yazi iHolo yeGolf yeNerer
I-Big Big Breakers Golfers: I-Top 6 Big Break Break
Amaqabane kaFred: Enye yeGolfu yeTystester Swingers
USara Brown Igalari yezithombe
UPaul Azinger: I-Bio yakhe kunye noMsebenzi weGalofu
I-Golfer uDustin Johnson: Ukususela kwiNgxabano ukuya kwiNtshontsho enkulu
URaymond Floyd: I-Golfer's Long Legacy of Success
Funda ngezoNkqubo zoMzimba ezahlukeneyo kwiBhunga loLuntu
I-Beluga Whale, i-Little Whale Ethanda Ukucula
I-Clarks Summit University Admissions
I-787 Dreamliner yaseBoing
Nguwuphi na umthi onjalo? Ukuchonga Imithi Emahlamvu
Iintlobo zeLizwi lokuQala ngesiNgesi
Isiyalo Sokomoya: Unqulo
Iyintoni intsingiselo yekota yeSikhism "Hola Mohalla"?
5 Abalawuli Abasindayo "Intambo Yomculo"
I-Broods ye-Periodical Cicada
Umthandazo weSanta Francis wase-Assisi
Funda Indlela Yokuthi 'Uthando' kwisiShayina saseChina
Ukuhlaziywa ngokupheleleyo kwe-2008 Kawasaki Ninja 250R
5 Ixesha elimangalisayo lase-Superman lithathwa ngokuba nguBatman
Isingeniso kwisiJamani "Amazwi omboleko"
Isivinini esikhulu sePing Pong Ball
IJografi yamaPhondo asePakistan kunye neNdawo yesiFundazwe
Igama 3 i-Monosaccharides
I-DUDA - Igama lokugqibela kunye nomvelaphi